ဆက်သွယ်ပြောဆို PCB ညီလာခံ - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ဒါမှမဟုတ် ICD , ဟုခေါ်သည် စက်မှုဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ .Wired ။
အဆိုပါ cable ကိုဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်စက်မှု field ရဲ့အမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေး, အပရော်ဖက်ရှင်နယ် linear ဆက်သွယ်ရေး, အမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေး protocols.Wireless ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအကြားစက်မှု Ethernet, ပြောင်းလဲခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအကြားဆက်သွယ်ရေးအဓိကအားဖြင့်ကြိုးမဲ့ AP ဖြစ်ပါသည်, ကြိုးမဲ့တံတား, wireless network ကိုကဒ်ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်ပါဝင်သည် ဖမ်းဆီးမှုများ, အင်တင်နာနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ။
cable ကိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်အားနည်း expansion, ကို attenuation, ဆောက်လုပ်ရေး၌ကြီးသောအခက်အခဲနှင့်တကွ, cable ကိုဆက်သွယ်ရေးအလွန်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ထိခိုက်သည်ခိုင်ခံ့သော Anti-်ရောက်စွက်ဖက်မြင့်မားတည်ငြိမ်မှု, အချို့လျှို့ဝှက်မြန်ဆန်ဂီယာမှုနှုန်းနှင့်န့်အသတ် broadband.However ဖြစ်ပါသည် ဆင်းရဲသော mobility နှင့်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်။
လေ့ cable ကိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြု Cable ကိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ: ကွန်ပျူတာ, တီဗွီ, တယ်လီဖုန်း, PCM, optical terminal ကို, etc
အဆိုပါ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများအကြီးမားဆုံးအားသာချက်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်, လိုင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, တစ်ဦးအချို့သော mobility ရှိပါတယ်, မိုဘိုင်း၏အခြေအနေများတွင်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်, ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲအနိမ့်ဖြစ်ပါသည်, ကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်လျက်ရှိ၏သို့သော်လည်းကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ အားနည်း Anti-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်, နှေးကွေးနေဂီယာနှုန်းကန့်သတ် bandwidth ကိုနှင့် distance.More တည်ငြိမ်ပြီးအဆင်ပြေန့်အသတ်ဂီယာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာရှိလိမ့်မည်။
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့်ဂြိုဟ်တု, ရေဒီယိုဘူတာရုံ, ကြိုးမဲ့တီဗီ (ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မြေအောက်ရထား), စသည်တို့ကြိုးမဲ့ LAN, မိုဘိုင်းဖုန်းမှ (မိုဘိုင်းဖုန်း), မိုဘိုင်းဖုန်းကို GPRS, ပါဝင်သည်
ယာဉ်-တပ်ဆင်ထားပစ္စည်းကိရိယာများမော်တော်ယာဉ် positioning ကို service.It အသုံးပြုသည် positioning ကို, အညွှန်း, လုံခြုံရေး, လုယက်မှု, သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိ, အင်တာနက်, ဂိမ်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ services.It နှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲသူများကပေးနိုင်ပါသည်အများပြည်သူလုံခြုံရေး, ဆေးကုသမှု, မော်တော်ကားငှားရမ်း, တက္ကစီမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါသည် စေလွတ် long-အကွာအဝေးခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝယ်လိုအားမော်တော်ယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစစ်ဆင်ရေးအပြီးဒါကြောင့်ဂျီပီအက်စ်ရဲ့ module တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်, ဂျီအက်စ်အမ် module, ထိန်းချုပ်မှုမော်ကျူးများနှင့်အရံ equipment.GPS module တစ်ခုဟာဂျီအက်စ်အမ် module ကိုစလှေတျထိန်းချုပ်မှု module ကိုစစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်သရုပျခှဲဆက်သွယ်ရေးအညွှန်းဂြိုဟ်တု positioning ကိုသတင်းအချက်အလက်, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ, ဂျီအက်စ်အမ် module ကို GPRS function ကို ဒေတာ, နောက်ထပ်စစ်ဆင်ရေးဂျီပီအက်စ်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းသရုပျခှဲ, လူတွေသတင်းအချက်အလက်ဖတ်နိုင်ဖြစ်လာ, ဒီသတင်းအချက်အလက်မှလူများ, ယာဉ်အချိန်ဇယားဆွဲ, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် control.All ဒေတာဆက်သွယ်ရေးလင့်များ bi-directional ဖြစ်ကြသည်။
အဓိက function ကို:
1. နေရာချထား function ကို
2. ကိုယ်ပိုင်အညွှန်း function ကို။
3. လုယက်မှုနှိုးဆော်သံ function ကို။
4. ခြေရာကောက် function ကို
5. Send status ကို function ကို။
6. Text-to-မိန့်ခွန်း function ကို။
7. အဝေးမှသတ် function ကို။
9. မြန်နှုန်းနှိုးဆော်သံ function ကို။
10. Track စံချိန် function ကို။
၏မျိုးဆက်ဆင့်ကဲ ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝယ်လိုအား, နည်းပညာနှင့် policy.In 5G များ၏အသက်အရွယ်၏ရလဒ်များကိုအင်အားစု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်, VR / AR စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြေတပြင်လုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကားမောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည် 5G စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်။ အစွန်းရောက်အနိမ့်အောင်းနေချိန်ကွန်ယက်ကို features တွေအတွက်5ဆကွန်ယက်ကို chip ကိုဗိသုကာနှင့်ကြီးမားသောစက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်းခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလူတန်းစားပေါင်းစုံအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ဒေါင်လိုက်လျှောက်လွှာမြင်ကွင်းစေနိုင်ပါတယ်, အင်တာနက်ခေတ်သို့လူ့အဖှဲ့အစညျးတင်ထားတော်မူမည်, နည်းပညာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထဲကနေကိုကြည့်ရှု ကမ်ဘာပျေါတှငျ life.All အဓိကနိုင်ငံများတွင်မှတ်၏ 5G သစ်ကိုစီးပွားရေးအသွင်ပြောင်းဖို့အစဉ်အလာစက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကဲ့သို့၎င်း, 5G ၏အရေးပါမှုကို unprecedented.5 ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်း၏အခြေခံပေါ်မှာအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင်ထုတ်မည် အင်တာနက်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, စမတ်ဇယားကွက်, မော်တော်ကား networking iot အခြေအနေတွေ, ပညာ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားကြီးမားသောအမှုန်တစ် breakthrou အတွက်ဦးဆောင်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည် gh ။
KingSong မြှင့်တင်ရန်နှင့်ထောက်ခံသူအယူအဆ "တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုက်ရှာ, အရည်အသွေး ချ. ၏နည်းပညာအားဖြင့်, ကောင်းမွန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်အနိုင်ရ" နှင့်အတူဖောက်သည်ပေး PCB ဆက်သွယ် နှင့် ဆက်သွယ် PCB ညီလာခံ အားလုံးသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကိုက်ညီဖို့, ရန် ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်စီမံကိန်းများ၏အသုံးပြုသူကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။